Chelsea oo guul kaga soo heshay garoonka Elland Road 10 xiddig oo kooxda Leeds United ah – Gool FM
(Leeds) 11 Maajo 2022. Chelsea ayaa guul ka soo heshay kooxda Leeds United oo ay ku booqatay garoonka Elland Road, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-3, ciyaar qeyb ka ahayd kulammada horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida ahayd ee Chelsea.
Daqiiqadii 4-aad Chelsea ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 0-1 ka dhigay Mason Mount, kaddib markii uu ka caawiyay saaxiibkiis Reece James.
55 daqiiqo marka ay dheesha mareysay Christian Pulisic oo ay caawin kaga timid saaxiibkiis Mason Mount ayaa wuxuu ciyaarta ka dhigay 0-2 ay ku hoggaamineysay Chelsea.
Romelu Lukaku oo caawin ay kaga timid Hakim Ziyech ayaa daqiiqadii 83-aad wuxuu hoggaanka u dheereeyay Chelsea dheesha ayuuna ka dhigay 0-3.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay 0-3 ay kaga soo adkaatay Chelsea, kooxda Leeds United oo ay ku booqatay garoonka Elland Road, Blues oo kaalinta saddexaad kaga jirta dhanka kala sareynta horyaalka Premier League ayaa waxay leedahay 70 dhibcood.
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Wolves iyo Man City ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey